Virus ကူးပြီးသေချင်သေပါစေ ဆွမ်းလောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ ပိုပို - Cele Gabar
Virus ကူးပြီးသေချင်သေပါစေ ဆွမ်းလောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ ပိုပို
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းအပြည့်နဲ့ဂီတခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းလာခဲ့သူပိုပိုကတော့ ပထမဆုံးတေးစီးရီးအခွေမှာကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းကို ရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ မိဘမေတ္တာငတ်ခဲ့ပြီး မပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရသူပီပီ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေထဲမှာတော့ အလွမ်းအဆွေးရသတွေကို ပိုမိုခံစားကြရမှာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုနဲ့အခိုင်အမာရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့သာမက အိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့ စတူဒီယိုတစ်ခုကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပိုကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ မန္တလေးမြို့မှာတစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲလေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အရှုံးပေါ်ခဲ့တာကြောင့် လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မလှူဒါန်းပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြောင်း မျှဝေပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Virus ကူးရင်ကူးပါစေ သူတတ်နိုင်တဲ့အထဲက သံဃာတော်တွေကိုတော့ ဆွမ်းလှူဒါန်းမယ့်အကြောင်း မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ “ကိုယ်ကတော့ Virus ကူးပြီး သေချင်သေပါစေ… ဆွမ်းလောင်းမှာပဲ… မနေ့က အိမ်ရှေ့မှာ တွေ့တွေ့နေလို့ဦးပဇင်းနဲ့ ကိုရင်လေးကို တွေ့တော့ဆွမ်းခံကြွပါ လို့ပြောပြီး အဒေါ်ကိုလည်း သမီးလျော့စားမယ်လို့ချိုင့်ထဲ သပိတ်ထဲကြည့်တော့ ပြောင်နေတာပဲ… ဘာမှမပါဘူး အဲ့ဒါနဲ့ ဆွမ်းလှူလိုက်တာ တော်တော်ပျော်သွားတယ်… လူတွေ လှူမှ ဘုန်းပေးလို့ရမှာ သာသနာတော်ကိုဆက်လက်ထမ်းရွက်နိုင်မှာမို့…. အိမ်ရှေ့လည်း တန်းဆွမ်းလောင်းတယ်… သာသနာတော်နဲ့ ပတ်သက်ရင်..သေချင်သေပါစေ ငတ်ချင်ငတ်ပါစေ…. အတတ်နိုင်ဆုံး လှူပါတယ်” ဆိုပြီး ဒီနေ့မှာ မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလောမှာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအတွက် ရှေ့ထွက်တိုက်နေရတဲ့ ဆရာဝန်၊သူနာပြု ဆေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် ဦးဆောင်ပြီး လှူဒါန်းပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို မလှူနိုင်တဲ့အပေါ်မှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေဘဲ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်စာ လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အကြောင်း ပရိသတ်ကြီးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source – ဝတ်ရည်မိုး
အခုလက်ရှိလူသားတွေရဲ့ဘဝက တရုတ်ကထုတ်တဲ့ ဟန်းဆက်လိုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်
ကျပ်မပြည့်တဲ့သူနဲ့ Video Call ပြောရတာမလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ